Make it BLACK or WHITE, Please!!! (တကယ်ပဲအပြီးသတ်တော့မှာလား) | Cornfields to Copenhagen
Make it BLACK or WHITE, Please!!! (တကယ်ပဲအပြီးသတ်တော့မှာလား)
by Khin Khin Myat Thu Hlaing — Yangon, Myanmar
by Khin Khin Myat Thu Hlaing, Myanmar
This isareflection on this week’s hectic actions on Climate Change and the Bangkok Conference in the voice of younger generations.
I introduced the summary of the Climate conferences taken place recently as well as the two key bodies of Bali road map, AWG-LCA and AWG-KP for they are the key elements in the ongoing Bangkok Conference and establishing the “substantially shorter negotiation text”.
I questioned why were they beating around the bush during previous conferences and did not make it BLACK or WHITE?
ဒီအပတ်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထ်ိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားသူများ အနေနဲ့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမယ့်အပတ်ပါ ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ စက်တင်ဘာလ၂၂ ရက်နေ့ ကစပြီး တပတ်လုံးလုံး ကမ္ဘာ ခေါင်းဆောင်တွေ ရော ရာသီဥတု ပြောင်းလဲ မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် သူတွေ ပါမကျန် အခုလာမယ့် Copehegan Climate Change Conference မှာ ရှင်းလင်းတိကျတဲ့ အဖြေ တစ်ခု ထွက်လာဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ကြလို့ ပါ။
၂၂ ရက်နေ့ ကနေ ၂၃ရက်နေ့ အထိ UN Head Quarters, New York, USA မှာ ကျင်းပခဲ့ တဲ့ ၂ ရက်ကြား UN High Level Event မှာ လဲ နိုင်ငံအသီးသီးက Climate Change ကို အရေးတယူဆောင်ရွက် မှာဖြစ်တဲ အကြောင့်း တစ် ကမ္ဘာလုံးကို သက်သေ တည်ပြီး ပြောခဲ့ ပြီးပါပြီ။
၂၄ရက်နေ့ နဲ့၂၅ ရက်နေ့ တွေအတွင်း Pittsburg, Pennsylvania, USA မှာပြု လုပ်ခဲ့ တဲ့G 20 Summit မှာလည်း ကမ္ဘာ့စီးပွုားရေး၊ လူမှုရေးပျက်ကပ်တွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရုင်းတဲ့ နေရာမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့အကျိုးဆက်တွေကို လျစ်လျူရှုထားလို့ မရဘူးဆိုတာ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေအားလုံး သဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။
အခုလဲ စက်တင်ဘာ ၂၈ရက် ကနေ အောက်တိုဘာ လ ၉ရက်နေ့ အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ မှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့အကျိုးဆက်တွေကို ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေရော ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေပါ အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိင် မယ့် နည်းလမ်းတွေကို လာမယ့် Copehegan အစည်းအဝေးမှာချပြနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးနေကြ ပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါ တော့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ အစည်းတွေဖြစ်တဲ့AWG-LCA နဲ့ AWG-KP ပါ၊
့AWG-KP ဆိုတာ February ၁၆ရက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီး Annex I Parties လို့ ခေါ်တဲ့ွ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဘယ်လောက် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်သလဲ၊ Kyoto Protocol ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပထမ ၇ years အတွင်း ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေ က Green House Gas တွေ ဘယ်လောက်လျှော့ချ ပြီးပြီလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ မလျှော့ချနိုင်သေးတာလဲ ဆိုတာကို စောင့်ကြည့် လေ့လာပြီးလိုအပ်တာတွေပြောတဲ့ အဖွဲ့ ပါ။ အခု ဘန်ကောက် Conference မှာတော့ ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ထုတ်လွှတ်နှုန်း နဲ့ဆို ၂ ၀၁၂ အပြီးမှာ ဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်၊ သတ်မှတ်စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်အောင်ဘာတွေထပ်လုပ်ဖို့ လို တယ်ဆိုတာကိုအဓိကလေးပေးမှာပါ။
AWG-LCA ကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အင် ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီမြို့ မှာ Bali Action Plan နဲ့ အတူမွေးဖွားခဲ့ပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုထိန်းချုပ်ရာမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့Mitigation, Adaption, Finance နဲ့ Technology တွေကိုအဓိကထားပါတယ်။ ဒီ Conference မှာတော့ အဲဒီအချက်တွေအားလုံးကို ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေ ရော ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံလေးတွေပါ အားလုံး အခက်အခဲ မရှိ လိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် Kyoto Protocol မှာလိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့ အဓိကထားဆွေးနွေွးှသွားမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့ တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်းနွှဲ ခဲ့သမျှပွဲတွေမှာတော့ သူတို့ ၂ဖွဲ့ရဲ့ အငြင်းပွှားနေတာနဲုပဲတော်တော်နဲ့ လိုရင်းမရောက်ခဲ့ပါဘူး။
အခုဒီလိုဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ လာမယ့် Copehegan အမှီ အဖြူအမည်း ကွဲဖို့ ခက်မှာပါ။ Climate Change ကို Global Action အနေနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ ထပ်ပြီးကြန့် ကြာသွားမှာပါ၊ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့ မျိုးဆက်သစ်တွေခံစား ရမယ့် ထွက်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကတော့ မတွေးရဲစရာပါ။
← The Truth will travel to Copenhagen
Chinese Environmental Scholar’s comments on Climate Change →